Kala soocida mesh ballaarinta birta
Waxyaabaha: saxan yar oo kaarboon ah, saxan aluminium, saxan bir ah, saxan titanium, iwm.
Nooca gudubka: dheeman, laba geesood, wareegsan, qaab gaar ah, iwm.
Daawaynta dusha sare: buufinta rinjiga lidka ku ah birqaadaha, galvanizing kulul iyo maro caag ah.
Cabbirka: balladhku wuxuu ku dhex jiraa 2m, dhererkana waxaa loo habeeyey iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Habka dhismaha ee saqafka saqafka fidsan ee birta ah: xajin xariiqda toosan ee sare → kala qaybi xariiqda darajaynta keel → rakib suspender keel → rakib keelka ugu weyn → rakib keel kaaliyaha → rakib shabagga la fidiyey → nadiifi dusha sare.
Tilmaamaha gaarka ah ee mesh ballaarinta birta waa sida soo socota
1. Dusha sare ee mesh waa iftiin, hufan, nabad ah, qani ku ah midabka, fududahay in la dhiso iyo qiimo jaban.
2. Aragtidu waa mid hufan oo furan, taas oo u sahlaysa daalka iyo kulaylka, mana saameynayso iftiinka maalinta iyo hawada.
3. Midabka, qeexida iyo cabbirka ayaa loo habeyn karaa si loo daboolo baahiyo kala duwan.
4. Marka loo isticmaalo sida alaabta saqafka, waxaa lagu dhejin karaa qaboojiyaha dhexe, nalalka, buufinta iyo tas-hiilaadka kale si loo isticmaalo isticmaalka waxtarka leh ee booska.
5. Qalabka aluminiumka ah ee aluminiumku si buuxda ayaa dib loo warshadeyn karaa, badbaado iyo ilaalinta deegaanka, iyo nolosha adeegga dheer.
Hore: Qurxinta gidaarka dibadda ee qolka Laser-ka ayaa gooyay muraayad bir ah oo xardhay
Xiga: Qurxinta / qaybinta / ee silsiladda aluminium aluminium daahyada mesh birta ah